Ny fahatsapan'i Airbnb momba ny antsy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fahatsapan'i Airbnb momba ny antsy
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny isa azon'ny Airbnb dia avo lenta ihany tamin'ny Q1 2021
Ny tsena dia antenaina hitombo amin'ny tahan'ny fitomboana 8.2% isan-taona eo anelanelan'ny 2019 sy 2023
Ny Airbnb dia toerana tsara hanararaotana an'io fitomboana io, indrindra amin'ny 'ara-dalàna vaovao'
Ny fanohanan'ny haino aman-jery nomerika sy haino aman-jery sosialy an'ny Airbnb dia hanampy bebe kokoa hahazoany hery
Ny isa azon'ny Airbnb dia avo dia 0.73 (maridrefy 0 ka hatramin'ny 1) tamin'ny Q1 2021, miaraka amin'ny lohahevitra lehibe ao amin'ny tatitry ny transcript fidiram-bola ao anatin'izany ny fandoavam-bola, ny fifehezana ary ny geopolitika. Ny fahatsapan'ilay orinasa dia somary avo kokoa noho ny salan'isa ho an'ny sehatry ny T&T, ary toa nahazo faharetana izy tamin'ny alàlan'ny famerenana ireo faritra mitombo ary mifantoka amin'ny asa lehibe '.
Ny teny hoe 'Travel' sy 'Summer Travel' dia anisan'ny teny lakile voalohany tao AirbnbNy sora-tanana misy azy, miaraka amin'ny 'Host' / 'Hosting' ary 'Investment' / 'Investing. Ny 'Online Travel' dia mety ho toerana mamiratra amin'ny 2021 satria ity tsena ity dia antenaina hitombo amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 8.2% eo anelanelan'ny 2019 sy 2023. Raha ny marina, ny sandan'ny tsena amin'ny dia an-tserasera dia mety hiampita $ 1 tapitrisa tapitrisa tamin'ny 2024.
Airbnb dia eo amin'ny toerana mety hanararaotana an'io fitomboana io, indrindra amin'ny 'ara-dalàna vaovao'. Ny areti-mandringana dia nidika fa mpandeha maro izao no mitady fialan-tsasatra any amin'ny toerana ambanivohitra sy ambanivohitra lavitra ny tanàn-dehibe, indrindra fa mbola misy ny fameperana sy ny tsy fahazoana antoka. Ny maodelin'ny orinasam-pandraharahana mifantoka amin'ny Internet sy maivana amin'ny orinasa dia namela azy hihetsika haingana amin'ny fiovana ateraky ny areti-mifindra, izay midika fa ny Airbnb dia nihatsara kokoa tamin'ny taon-dasa raha oharina amin'ireo karazana mpamatsy fampiantranoana nentim-paharazana.
Lohahevitra lehibe hafa ho an'ny Airbnb ny 'Media sosialy sy dizitaly'. Ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa COVID-19 farany teo dia nanambara fa ny 24% n'ireo mpandray anjara dia mandany fotoana somary 'somary' na 'tena lehibe' amin'ny media sosialy noho ny teo aloha COVID-19. Ankoatr'izay, ny fanadihadiana Q1 2021 dia nahatsikaritra fa ny 73% amin'ireo mpamaly dia 'manohy' ary 'matetika kokoa' mandany fotoana amin'ny Internet. Ny fanohanan'ny haino aman-jery nomerika sy haino aman-jery sosialy an'ny Airbnb dia hanampy azy bebe kokoa hahazo tombony rehefa miroso amin'ny fanarenana tsikelikely
Jamaika dia manambara Serivisy an'habakabaka vaovao avy any Stockholm mankany Montego Bay Novambra 27, 2021
Ny Jamaica Tourist Board dia faly manambara fa ny VING, tantanin'ny Sunclass Airlines, dia hiverina amin'ny toerana haleha miaraka amin'ny sidina mivantana avy any Stockholm, Soeda mankany Jamaika. Hanomboka amin'ny Novambra 2022 ny fandaharam-panidinana isaky ny roa herinandro ary haharitra hatramin'ny martsa 2023 ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny ririnina 2022/23. VING dia hanao fihodinana 9 ho an'ny ririnina 2022/23 miaraka amin'ny seza 373 isaky ny sidina, amin'ny Airbus A330-900neo.
Birder Veteran Herbert Byaruhanga Filoha vaovaon'ny Fikambanan'ny Fizahantany Ouganda Novambra 27, 2021
Voafidy ho filohan'ny Ogandà Tourism Association (UTA) tamin'ny 20 Novambra ho an'ny taona 2022/23 tao amin'ny Fivoriambe fanao isan-taona tao amin'ny Hotel Africana ao Kampala, ilay mpihaza zokiolona Herbert Byaruhanga.
IATO dia mandray ny famerenana indray ny asa sidina iraisam-pirenena saingy maniry bebe kokoa Novambra 27, 2021
Naneho fankasitrahana ny governemanta ny Fikambanan'ny Opérateurs Tour Indiana (IATO) tamin'ny fandraisan'ny governemanta ny fanapahan-kevitra momba ny fanohizana ny sidina iraisam-pirenena tsy tapaka nanomboka ny 15 Desambra 2021.
Iberia Advance Passenger Information through New Partnership Novambra 27, 2021
Ireo mpaninjara indostrian'ny fitsangatsanganana dia afaka mifandray manomboka anio mankany Iberia amin'ny alàlan'ny Kyte API ary miditra amin'ny saran-dalan'ny fiaramanidina sy ny serivisy fanampiny.
Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia miray hina hatrany: any Rwanda izao Novambra 27, 2021
Ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny fizahantany afrikanina (ATB), Atoa Cuthbert Ncube, dia nandray fitenenana tamin’ny fiaraha-misakafo natrehin’ny minisitry ny fizahantany, ny masoivoho ary ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny fizahantany isan-karazany niaraka tamin’ireo matihanina amin’ny fizahantany maherin’ny 3,000 izay nandray anjara nandritra ny herinandron’ny fizahantany tany Rwanda.
Nofy ratsy virosy vaovao ve? Miantso ny WTN Mandat ny Vaksiny Maneran-tany sy ny fitoviana amin'ny fitsinjarana Novambra 27, 2021
Taitra sy tezitra i Afrika Atsimo taorian'ny nahitana ny tsimok'aretina Omicron an'ny coronavirus. Nandritra ny alina, indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany miandrandra hazavana mamiratra kokoa any amin'ny faran'ny tonelina, niverina tao anatin'ny vanim-potoana maizina niaraka tamin'ny fanakatonana ny sisintany, fanafoanana ny sidina ary ny otrikaretina tsy fantatra izay manohintohina ny fahasalamam-bahoaka sy ny fivelomana.
I Jamaika izao dia mikendry mpitsidika sambo 3 tapitrisa amin'ny 2025 Novambra 27, 2021
Dr. Taleb Rifai antso maika ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO mamaly ny filankevitra mpanatanteraka amin'ny taratasy misokatra vaovao Novambra 26, 2021
IATA: 12 volana manankery ny Vondrona EU COVID dia hiaro ny fanarenana ny fizahantany Novambra 26, 2021
Fandaniam-bola sy sakana tsy ilaina amin'ny fahalalahan'ny olona mivezivezy ny fanavakavahana amin'ireo vaksiny neken'ny OMS.
Ny vanim-potoanan'ny ski eoropeana vaovao dia mihantona amin'ny fifandanjana Novambra 26, 2021
Ny fisondrotan'ny fitakiana mahazatra dia hisy fiatraikany satria ny areti-mifindra, indray mandeha, dia mampiakatra ny lohany amin'ny tsenan'ny loharano ski lehibe sy toerana haleha.
Savorovoro ny Zoma Mainty tany Londres rehefa nitokona ny mpamily Tube Novambra 26, 2021
Nandefa miaramila tany amin'ny Nosy Salomon i Aostralia taorian'ny korontana nahery vaika Novambra 26, 2021
Mifamatotra amin'ny olana maro eo an-toerana ny fihetsiketsehana – angamba ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny fanapahan-kevitry ny governemanta Solomona tamin'ny taona 2019 hanapaka ny fifandraisana ara-diplaomatika amin'i Taiwan ho an'i Shina.
Firenena maro no nampiato ny sidina iraisam-pirenena noho ny variana COVID-19 vaovao Novambra 26, 2021
Nofoanan'ny Cathay Pacific ny sidina taorian'ny nandraisan'ny mpiasan'ny mpiasa ny fitsipiky ny fanokanana vaovao Novambra 26, 2021
Voatery nanafoana ny sasany tamin'ireo sidina mpandeha nankany Hong Kong i Cathay Pacific taorian'ny nandavan'ny ankamaroan'ny mpiasany ny fitsipiky ny fijanonan'ny mpitatitra.
Nandrara ny mpitsidika avy amin'ny firenena fito any atsimon'i Afrika i Israely Novambra 26, 2021
Ny fanitarana ny lisitra 'mena' dia nilaina noho ny fahitana ny mpahay siansa Afrikana Tatsimo ny variana COVID-19 vaovao any amin'ny faritra atsimon'i Afrika, hoy ny biraon'ny PM.